अफगानिस्तान मैदान माग्छ, हामी बल... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
चन्द्र काफ्ले काठमाडौं, चैत ८
क्रिकेट श्रृंखला- ४
(सेतोपाटीले सोमबारदेखि क्रिकेट श्रृंखला सुरू गरेको छ। यो श्रृंखलामा नेपाली क्रिकेटलाई अझ माथि लैजान राज्यले गर्नु पर्ने पाँच कामको चर्चा गर्नेछौं। श्रृंखलाको पहिलो भागमा नेपाली क्रिकेट खेलाडीले पाउने पारिश्रमिकबारे चर्चा गरेका थियौं। दोस्रो भागमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) मा केन्द्रीत थियो। यस्तै तेस्रो भागमा हामीले खेल मैैदानका बारेमा लेखेका थियौ। आज हामीले कूटनीतिक विषयमा चर्चा गरेका छौं।)
भारत र पाकिस्तानले बिग्रिएको राजनीतिक सम्बन्ध सुधार्न धेरै पटक क्रिकेटको सहारा लिएका छन्। क्रिकेट ‘क्रेजी' यी दुई राष्ट्रमा कूटनीतिज्ञले सहज पार्न नसकेको सम्बन्धमा 'आइसब्रेक' गर्न क्रिकेट माध्यम बन्दै आएको छ।
नेपालको कुनै छिमेकीसँग सुधार्न नसक्ने तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छैन। हामीले भारत र पाकिस्तानजस्तो क्रिकेटलाई कूटनीतिको हिस्सा बनाउनु पर्दैन, तर अब कूटनीतिलाई क्रिकेटको हिस्सा भने बनाउनु पर्ने समय आएको छ।
एक दिवसीय मान्यता पाइसकेपछि त झन् नेपाली क्रिकेटको विकासका लागि कूटनीतिको भुमिका झनै महत्वपुर्ण बनेको छ।
एकदिवसीय मान्यता पाउनु भनेको विश्वका उत्कृष्ट क्रिकेट टोलीसँग खेल्ने अवसर पाउनु पनि हो। तर सधैँ व्यस्त क्यालेन्डरमा रहने ती टोली आफैं हामीसँग खेल्न आउँदैनन्, त्यसको हामीले नै बलियो पहल गर्नुपर्छ।
उनीहरूलाई नेपाल बोलाउन होस् वा उनीहरूको मैदानमा गएर खेल्न हामीले कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गर्नै पर्छ।
क्रिकेट शृंखला- ४- क्रिकेटसँग जोडौं कर्पोरेट
हामीले पहल गर्ने हो भने उनीहरु खेल्न तयार हुन्छन् भन्ने संकेत देखिएको छ। भारतीय पूर्वकप्तान महेन्द्रसिंह धोनीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपालले पाएको सफलतालाई ठूलो उपलब्धि भएको बताएका छन्।
‘यो नेपालको ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भनेका छन् ‘एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले नेपालमा क्रिकेट प्रवर्द्धन र रूपान्तरणमा थप टेवा पुग्नेछ।’
भारतीय पूर्वक्रिकेटर वीरेन्द्र सेहवागले पनि फेसबुक लाइभमार्फत् नेपालले वान डे मान्यता पाएर कमाल गरेको बताए।
‘नेपाली टोलीले त कमाल गरेको छ। नेपाललाई अब एक दिवसीय राष्ट्रको दर्जा मिलेको छ,’ उनले भने।
सेहवागले गत वर्ष यू-१९ एसिया कपमा नेपालले भारतलाई हराएको प्रसंग कोट्याउँदै थपे- एक दिवसीय मान्यता पाउनुअघि नेपालको यू-१९ टोलीले भारतलाई हराएको थियो। मैले त्यो खेल हेरेको पनि थिएँ। नेपालले खेलेको खेल देखेर मजा आएको थियो।’
क्रिकेट श्रृंखला-३ - ‘टुँडिखेलमा खेलेर विश्वकप पुगिन्न’
भारत नयाँ राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न प्राय: तयार हुने गरेको छ।
जिम्वाबे र बंगालदेशसँग पनि पहिलो टेष्ट भारतले नै खेलेका थियो। हालै टेष्ट मान्यता पाएको अफगानिस्तानसँग पनि पहिलो टेष्ट भारतले नै खेल्ने भएको छ।
कुटनीतिक पहल गरे व्यस्त क्यालेन्डरका बावजुद् पनि भारतले हामीसँग खेल्न सक्छ। भारतलाई पनि आजकाल राजनीतिमा होस् वा खेल छिमेकीहरुको साथ चाहिएको छ।
क्यालेन्डरमा नभए पनि यही साता सकिएको निदाहास ट्रफी खेल्ने श्रीलंकाको आग्रह भारतले स्वीकारेको थियो।
आन्ध्रप्रदेश क्रिकेट बोर्डका एक पदाधिकारी निजी कामले काठमाडौं आउँदा नेपाली क्रिकेट टिमलाई सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान तथा यू-१९ का प्रशिक्षक विनोद दासले बताएका छन्।
‘एक महिनामा कम्तिमा चार वटा दुई/तीन दिवसीय खेल हामी खेलाइदिन्छौं। हाम्रोजस्तै सबै सुविधा दिन्छौं। जस्तो भन्यो त्यस्तै पिच पनि दिन्छौं, मेन्टिनेन्स खर्चमात्र दिनु त्यो पनि पर्दैन बरू तिमीहरूकालागि हामी सहयोग गर्न तयार छौं,’ ती पदाधिकारीले भनेको दासले सम्झिए।
प्रान्तको क्रिकेट बोर्डले हामीलाई यस्तो प्रस्ताव गर्छ भने राज्यले पहल गर्ने हो भने नहुने केही छैन।
'तिमीहरू बिसिसिआईसँग कुरा गर, मोदीसँग कुरा गर नेपाली क्रिकेटलाई सहयोग हुन्छ,’ उनको भनाइ उदृत गर्दै दासले भने।
जगजाहेर छ, भारतको राजनीतिक नेतृत्व पनि दुई वर्षअघिको नाकाबन्दीले नेपालसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छ।
केपी शर्मा ओली सरकार गठन हुनुअघि विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आइन्। केही समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदैछन्। 'रोटी-बेटी' जस्तै नेपाल र भारत सम्बन्धको नयाँ आयाम क्रिकेटमा द्वीपक्षीय सहयोग बन्न सक्छ।
आइसिसीको ७० प्रतिशत कमाई भारतमै निर्भर छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भारत सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। भारतले अफगानिस्तान र बंगालादेशलाई टेस्टस्तर दिलाउन सहयोग गरेजस्तै हामीलाई पनि सहयोग गर्न सक्छ।
दक्षिण एसियाको अर्को क्रिकेट 'पावर हाउस’ पाकिस्तानसँग सम्बन्ध बढाउन नेपाललाई झनै सहज छ। पाकिस्तानी खेलाडीहरूको पनि नेपाल र नेपाली क्रिकेटप्रति ठुलो सद्भाव छ। नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाएलगत्तै पाकिस्तानी पूर्वकप्तानहरूले पनि नेपालीलाई बधाई र थप सफलताको शुभकामना दिए।
पाकिस्तानी पूर्वकप्तान तथा पाकिस्तानी राष्ट्रिय टिमका मुख्य चयनकर्ता इन्जमाम उल हकले ट्वीट गर्दै भनेका छन्- ओडिआई मान्यताका लागि नेपाललाई बधाई! कस्तो गज्जब यात्रा!
अर्का पाकिस्तानी पूर्वकप्तान वकार युनिसले ट्वीटरमा लेखेका छन्- सपनाहरू पुरा हुन्छन्, होइन र? एक दिवसीय मान्यता पाएकोमा बधाई नेपाल! तपाईंहरूलाई एकदिवसीय मञ्चमा हेर्न उत्साहित छु।
पाकिस्तानी राजनीतिक नेतृत्वले पनि पछिल्लो समय नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नेपाल आए।
केही वर्षदेखि सुरक्षाका कारण पाकिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल भएका छैनन्। उनीहरूले युएई गएर द्वीपक्षीय खेल खेलिरहेका छन्। नेपालले राम्रा रंगशाला बनाएर कूटनीतिक पहल गर्ने हो भने पाकिस्तान आफैं हामीसँग खेल्न आउन सक्छ। उसले युएईमा खेलिरहेका खेल पनि हाम्रोमा खेल्न सक्छ। युएईको गर्मीमा खेल्नुभन्दा पाकिस्तान र अन्य राष्ट्रलाई पनि काठमाडौंको शीतलमा खेल्न सहज हुन सक्छ। हाम्रो कुटनीतिले नेपालको जुन भुस्थिति छ, जुन शीतल मौसम छ त्यसलाई क्रिकेटमा ‘हट कमोडिटी’का रूपमा प्रचा प्रसार गर्नुपर्यो, बेच्नुपर्यो।
श्रीलंका क्रिकेट बोर्डले पनि नेपालले ओडिआई मान्यता पाएकोमा बधाई र शुभकामना दिँदै चाँडै नेपालसँग प्रतियोगिता खेल्ने बताएको छ।
हाम्रो छिमेकी देशका पहिलो रोजाइका खेलाडी सुरू मै नआउलान् तर सम्बन्धित बोर्ड र सरकारको अनुरोधमा हामीसँग वान डे खेल्न दोस्रो रोजाइका खेलाडीहरू पठाउन छिमेकी मुलुकलाई कुनै समस्या हुन्न।
नेपालप्रति छिमेकीको बलियो सद्भावलाई क्रिकेटको विकासका लागि सहयोगमा बदल्न सकिन्छ। हाम्रोतर्फबाट प्रयत्नको भने खाँचो छ।
हाम्रा खेलाडीलाई केही वर्षका लागि नेपाली सिनियर टिमलाई भारत अथवा अन्य कुनै छिमेकी मुलुकमा तीन दिवसीय वा चार दिवसीय खेलहरू खेल्ने वातावरण मिलाउन पहल गर्न सकिने पूर्वकप्तान तथा प्रशिक्षक विनोद दासलेले बताए।
क्रिकेटमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाले पनि छिमेकी दक्षिण अफ्रिकाको घरेलु प्रतियोगितामा भाग लिन्छ, आफ्नो क्रिकेट विकास गर्छ।
क्रिकेटको विकासका लागि कूटनीतिको राम्रो सदुपयोग गरेको अर्को राष्ट्र अफगानिस्तान हो।
'सुरक्षाका कारण आफ्नो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न नपाएको अफगानिस्तानले पनि भारतको नोयडामा एउटा सुविधासम्पन्न मैदानमा कुटनीतिक पहल गरेर सस्तो मूल्यमा खेल्न उपभोग गरिरहेको छ,’ दासले भने।
हालसम्म भने क्यानले भारतसँगको सम्बन्धको राम्रो सदुपयोग गर्न सकेको छैन। हामीले केमा सहयोग लिने पनि जानेका छैनौँ।
'अफगानिस्तानले रंगशाला माग्छ, हामी भने बल माग्छौं,' दासले भने।
सन् २०१४ को टी-ट्वान्टी विश्वकप खेलिसकेकपछि नेपालले टी-ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो। त्यसपछि पाएको अवसरको हामीले कुनै उपयोग गरेनौं। कुनै एक देशसँग पनि हामीले टी-ट्वन्टी खेलेनौं।
आउने चार वर्षमा हामीले नेपाली क्रिकेटलाई अघि बढाउने हो भने पुरानो तौरतरिका दोहरिन दिनुहुन्न।
कूटनीतिक पहल नगरी बस्यौं भने यसअघि ओडिआई मान्यता पाएका हङकङ, पपुवा न्यूगिनी र युएईको जस्तै हाल हाम्रो पनि हुनेछ।
चार वर्षसम्म उनीहरुले कुनै पनि ठूला टेष्ट राष्ट्रसँग खेल्ने मौका पाएनन्। पपुवा न्युगिनी र हङकङ त अोडिआई राष्ट्रको सुचीबाट झरेर अहिले डिभिजन-२ मा पुगेका छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ९, २०७४, ०२:४४:३१